Maxaa ka Run ah Wararka Sheegaya in ONLF ay ka Garab Dagaalanto Ururka Al Shabaab? – Rasaasa News
Sep 24, 2009 Jwxo-shiil, Somaliya
Waxaa baryahan oo dhan la is la dhexmaraayey in ururka ONLF, uu ka dagaalamo gudaha Somaliya isaga oo gacan siinaya ururka Al shabaab, arimahan oo noqday sheegasho iyo beenin ayaan bal eegaynaa sida ay wax u jiraan.
Xukuumada Itobiya waxaa ay waligeedba ku doodaa in ururka ONLF uu yahay urur xag jir ah, waxayna sabab ka dhigataa Itobiya labo arimood oo dhab; marka 1aad dadka ay u dagaalanto ONLF waa dad muslin ah 100%, labo dalalka reer galbeedku waxaa ay shaki wayn ka qabaan ururada ku dagaalama magac diimeed. Hadaba si ay uga faa,iidaysato ayey Itobiya ku tilmaantaada ururka ONLF iyo Jabhada walba oo u dagaalanta xoraynta dhulka Somalida Ogadeeniya ay ugu yeedhaa urur diimeedyo aan kharbudaada wada, arintuse sida ay Itobiya u sheegto way ka gadisan tahay.
2001, ayey ahayd markii ugu horeysay ee dalka Maraykanku sheegay ONLF in ay tahay urur xornimo doon ah, laban sheegin ruux ku hadlaya magaca ONLF oo xabd ka riday meel aan ahayn dhulka uu ururku u dagaalamayo. Sidaasina waxaa lagu aaminay in ay ONLF tahay jabhada xornimo doon aha oo aan cidna xad gudub u gaysan, xitaa magaalooyinka Itobiya ee ayna daganayn dad aan ahayn Somalida Ogadeeniya, waxaana ay dalalka reer galbeedku cad u bixiyeen damaanad ah in ururka ONLF uu joogi karo dalalkooda.
Hadaba, sidii aynu muddo maqlaynay waxaa ururka ku soo kordha siyaasado iyo caadooyin aan dhaqan u ahayn, ururka ONLF waxaa uu maanta u jiraa magac ahaan laakiin ma ururkii ONLF ee la aaminay. Sanadkan bilowgiisii waxaa garab ka mid ah ururka ONLF oo uu hogaamiya M Cumar Cismaan [Jwxo-shiil] ay dagaal kula galeen koonfurta Somaliya urur Somali ah oo ka arimiya gabalada Jubooyinka, arintaas oo shaki weyn galisay dadka Somaliyeed iyo aduunkaba. Waxaana markii dambe la ogaaday in ururka wax iska caabinta [Juba Resistant Army] iyo ururka ONLF ay tababar ku wada qaadanayeen meel ka tirsan gabalka Jubada Hoose, waxaa iyana aad loola yaabay wax keenay in ay isku dhafmaan ururka ONLF iyo urur ka mid ah qabqableyaalka dagaal ee Somaliya.
Waxaa dhab noqotay, in garab ka mid ah ururka ONLF ay badaleen hadafkoodii ahaa xornimo u raadinta dhulka Somalida Ogadeeniya, oo uu galay hunguri ah ka kaluumayso qaybo ka mid ah dhulka Jamhuuriyada Somaliya, in kasta oo kolkii dambe ay dagaal ku qaadeen dadkii degaanka deganaa, sidaasina uu ku kala tageen ciidamadii ONLF ee halkaas joogay.
Warar hoose oo xog ogaal ah ayaa waxay sheegayaan in uusan wali dhamaan hankii garab ka mid ah garabyada ONLF uu ku doonayey in uu saldhigyo ciidan uu kaga samaysto gabalka Jubada hoose. Waxaa iyana dhab in uu iskaashi xoog leh ka dhaxeeyo ururka wax iska caabinta Jubooyinka [Juba Resistant Armay] iyo garabka Jwxo-shiil, waxaana jira saraakiil ONLF ah oo ciidamo ka qora xeryaha qaxootiga ee Dhadhaabo, waxaa kale oo iyana jira masuuliyiin ururka wax iska caabinta Jubooyinka oo iyana ciidamo ka ururiya xeryaha qaxootiga iyo degaanada Jubooyinka. Labadan urur oo wada socda waxaa ay doonayaan sidii ay uga qabsan lahaayeen gabalada Jubooyinka ururada Islaamiyiinta ah ee haysta, lama oga xidhiidhka ka dhaxeeya xukuumada taagta daran ee Somaliya iyo labadan urur ee is kaashaday.
Ururka ONLF garabka Jwxo-shiil, ayaa iyagu iskaga baxay dhulka Somalida Ogadeeniya una hayaamay xaga koonfurta Somaliya, hadaba sheegashada Gudoomiyaha degmada Yeed uu ku sheegtay in ciidama ONLF ah ay ka qabsadeen magaalada yeed ayaa waxay u eg tahay, in uu arkay ciidamo ONLF ah oo ka soo talaabay xadka kuna sii jeeda koonfurta Somaliya.
In kasta oo ay xukuumada Eritrea wada taageerto Islaamiyiinta ka dagaalama Somaliya iyo ONLf garabka M Osman, hadana ma jiraan xidhiidh muuqda oo ka dhaxeeya, waxaase dhex taal colaad muuqata oo ay dagaalo iskaga hor yimaadeen.
Waxaa jira ONLF garabka uu hogaamiyo Salaxdiin Cabdiraxmaan Macow, oo iyadu baaqi ku ah dhulka Somalida Ogadeeniya, Somaliyana si nabad ah oo aan hubaysnayn ku joogta dalka Somaliya.
Waxaan marna la qiyaasi karin ONLF, garabka M Osman, oo mudooyinkii ugu dambeeyeyba ku socday siyaasad Jahawareersan oo aan lahayn meel loo raaco, galisayna qasbadan hanaankii halgan ee uu lahaa ururka ONLF, waxaana uusan garabkani wax taageero ah ku lahayn meelna gudaha iyo dibada midna. Waxaanan filayaa in uu yahay ONLF garabka M Osman ka soo saaray wareegtada uu ku beeninayo sheegashada gudoomiyaha Yeed ee gabalka Bakool uu ku sheegay in ay ONLF ka garab dagaalanto ururka Al shabaab. Wuxuu garabkani qoraalo aan sal iyo raadtoona lahayn had iyo goorba ku qoraa Internetka arimo aad runta uga fog sida; sheegasho dagaalo aan dhicin oo ay maalin walba soo qoraan iyo waliba sheegida shirar aan dhicin, arintaas oo ay aad ugu wareersan yihiin dadka u dhashay dhulka Somalida Ogadeeniya.
Runtu waxaa ay tahay in ONLF garabka M Osmaan ay dhaqdhaqaaqyo ka wado koonfurta Somaliya iyo gabalka Somalida ee Kenya kaas oo ay ku doonayso in ay awood ku yeelato gabalka Jubada hoose, waxaase loo malaynkaraa in sheegashada gudoomiyaha magaalada Yeed in ayna run ahayn.